u-Markram uqale kahle njengoba ama-Proteas efaka ama-runs
Aiden Markram and Dean Elgar of the Proteas during day 1 of the 1st Sunfoil Test match between South Africa and Bangladesh at Senwes Park on September 28, 2017 in Potchefstroom, South Africa. (Photo by Lee Warren/Gallo Images)
u-Aiden Markram ukhethe okubalulekile kuma-Standard Bank Proteas njengoba ehlanganise u-97 kumdlalo wakhe wokuqala ngaphambi kokuthi aphume nge-run-out futhi nokuhlanganisa ama-runs angu-196 nge-wicket yokuqala no-Dean Elgar.
u-Elgar uhambe waze wahlanganisa ikhulu lakhe lama-Test lesishagalolunye kanye nelesine kulonyaka, ama-Proteas amekahle ekupheleni kosuku, ethunywe ukuthi ashaye kuqala futhi eqeda usuku eku-298 kuphume u-Markram kuphela.
Kube okokuqala ama-Proteas ethola i-partnership evula umdlalo edlulile ku-150 eminyakeni eyisikhombisa. Okugqamile kube isimilo kanye nokuphatha kuka-Markram obukeke sengathi uchithe impilo yakhe edlala ikhilikithi yama-Test. Futhi, uma bekukhona ukuphoxeka ngokungalitholi ikhulu, okuncane ekutheni kuthembisa umsebenzi omuhle ozayo.
Ama-runs angu-97 ka-Markram afike emabholeni angu-152 (13 fours) futhi i-partnership yabo ibe ama-runs angu-196 kuma-overs angu-54.2.
u-Elgar ushaye kwaze kwaphela usuku (128 off 285 balls, 9 fours, 2 sixes) futhi wahlanganisa enye i-partnership yama-runs angu-102 no-Hashim Amla (68 off 103 balls, 7 fours, 1 six). u-Elgar usedlule u-Cheteshwar Pujara we-India ohamba phambili ngama-runs amaningi ekhilikithi yama-Test kulonyaka futhi udinga amanye ama-runs amahlanu ukuthola i-aggregate yama-runs angu-900 nge-average engu-52.
i-run out iyona esondeze i-Bangladesh ekukhipheni umuntu njengoba abahlaselayo balethe izinkinga ezimbalwa kwi-pitch, ngaphandle kwe-uneven bounce, bekuhambelana nokushaya.
Ama-Proteas aphinde anika u-Andile Phehlukwayo i-first cap njengokwenza konke futhi bobabili babe abadlali besi-97 no-98 abadlalela ama-Proteas kwikhilikithi yama-Test.
Ama-Proteas afuna ukunqoba ama-Test – Rabada uMarkram uzodlala umdlalo wakhe wokuqala kwi-Test series ne-Bangladesh i-Faf du Plessis uzohola ama-Proteas kuma-format amathathu i-CSA iqoka u-Ottis Gibson njengomqeqeshi wama-Proteas SA ‘A’ ilungele umdlalo wokugcina wezinsuku ezine -Moeen Ali uphosela i-England ukuthi inqobe i-series Ama-Proteas ahlala egxilile ekuqedeni kahle uhambo u-Markram uzohola i-SA A kwi-series yezinsuku ezine bedlala ne-India A Maharaj uhamba phambili ekubekeni i-England phansi Ama-Proteas azimisele ekugcineni irekhodi elincomekayo u-Philander ubeka isonto ‘elinzima’ emuva kwakhe